Cid Walba Barcelona Ma Ahan- Atletico Madrid Oo Garaacday Liverpool Kana Cirib Tirtay Champions League %
Cid Walba Barcelona Ma Ahan- Atletico Madrid Oo Garaacday Liverpool Kana Cirib Tirtay Champions League
By Ramzi Yare	 On Mar 12, 2020
kooxaha Liverpool iyo Atletico Madrid ku dhex maray Anfield kulan ka tirsanaa lugta 2-aad ee wareeya 16-ka tartanka champions League.
Kulanka ayaa ahaa mid si weyn loo sugayay iyada oo indhaha adduunka oo dhan la socdeen waxa ka soo baxa kulanka xilli Atletico Madrid 1/0 ku hogaaminayso kaas oo ay dhaliyeen kulankii lugta 2-aad.
Atletico Madrid ayaa si dar-dar leh ku bilaabatay ciyaarta iyada oo uu daqiiqadii ugu horaysayba Diego Costa helay fursad cajiib ah laakiin uu goolka garab mariyay birta.
Liverbool ayaa guud ahaan kulanka 73% maamulaysay ciyaarta xilli ay Atletico Madrid 10 xiddig ku daba joogeen kubad walba oo ay Liverpool haysato iyaga oo u diidayay in ay helaan boosas furan taas oo ah wax si weyn loo filanayay.
Atletico Madrid ayaa ku tiirsanayn weerarka rogaal celis ka ah xilli ay Liverpool samaysay fursado waali ah iyada oo uu Goolhaye Jan Oblak badbaadiyay 3 fursad oo ay heleen xiddigaha Firmino, Alex Oxlade-Chamberlain iyo waliba Sadio Mane xilli uuna Mohamed Salah qaybtii hore soo bandhigin qaab ciyaareed fiican.
Alex Oxlade-Chamberlain ayaa la odhan karaa waxa uu ka mid aha ugu cad-cad kulanka isaga oo Atletico Madrid khaati kaga dhigay kubad uu la ordo iyo waliba in uu daafacyada Ka daba boxo.
Kadib 5 fursad oo ay si toos ah Goolhayaha ula heleen kooxda Liverpool ayaa dhalisay goolka furitaan iyaga oo uu si qurux badan daqiiqa 43-aad ugu dhaliyay xiddiga khadka dhexe ee Georginio Wijnaldum kaas oo ciyaarta ka dhigay 1/0.
Waxa sidaas ku dhamaatay qaybtii hore ee ciyaarta oo ay Liverpool ahayd kooxda fiican xilli ay Atletico Madrid ku ciyaaraysay 10 xiddig oo daafac ah.
Qaybtii dambe ee ciyaarta ayaa ku bilaabatay mid ay Liverpool gacan sarayso iyaga oo Atletico Madrid ku riixaya in ay dhaliyaan goolal.
Waxa aynu odhan karnaa kaliya Nasiib ayaa Liverpool ka hor istaagay in ay dhaliso goolal kale marka loo eegi birihii ay garaacday iyo waliba badbaadinadii uu sameeyay Goolhayaha Atletico Madrid.
Qaybtii dambe Liverpool ayaa kubada haysatay 66% iyaga oo 11 kubad la helay goolka xilli ay Atletico Madrid hal mar kubad ku laagtay goolka Liverpool waliba hal mar aragtay Goolhaha Reds.
Atletico Madrid ayaa daqiiqadii ugu dambaysay dhalisay gool taas oo keentay in ay dhamaan xiddigaha Atletico iyo waliba shaqaalaha tababarku si waali ah ugu dabaal dageen laakiin waxa ugu dambayn lagu diiday Offside uu ku jira xiddigii dhaliyay.
Robin Van Persie-ga Cusub Ee Haatan Man United oo Luke Shaw…
Xaaladda Guud Arsenal Ee Xili Ciyaareedka Dambe Oo La…
Waxa sidaas ku dhamaatay wakhtigii dambiiciga ahaa ee ciyaarta ee 90-ka daqiiqo taas oo keentay in lagu daro 30 daqiiqo oo kale si loo go’aamiyo ciyaarta.
Liverpool ayaa qaybtii dheeriga ahayd ku bilaabatay si dar-dar leh iyaga oo wali raadinaya gool ay ka dhaliyaan kooxda Atletico Madrid.
Daqiiqadii 94-aad ayay Liverpool dhalisay goolka 2-aad iyaga oo uu u dhaliyay xiddiga Roberto Firmino kaas oo ciyaarta ka dhigay 2/0 ay Reds ku hogaaminayso ciyaarta.
Laakiin 3 daqiiqo kadib daqiiqadii 97-aad ayuu Goolhayaha Liverpool ee Adrian sameeyay khalad waali ah isaga oo kubad u dhiibay xiddigaha Atletico Madrid kaas uu goolka 1-aad ka dhaliyay xiddiga Marcos Llorente kaas oo ciyaarta ka dhigay 2/1.
Daqiiqadii 105-aad ayay Atletico Madrid dhalisay Goolka 2-aad ee ciyaarta iyaga oo uu u dhaliyay xiddiga Marcos Llorente kaas oo ciyaarta ka dhigay 2/2.
Daqiiqadii 120-aad ayay Atletico Madrid dhalisay goolka 3-aad ee ciyaarta iyaga oo uu u dhaliyay xiddiga Alvaro Morata kaas oo ciyaarta ka dhigay 3/2
Waxa sidaas ku dhamaatay Ciyaarta oo ay Atletico Madrid kooxda difaacanaysa Champions League ku reebtay garoonkeeda Anfield.
Paul Pogba ayaa laga yaaba inuu heshiis cusub Manchester United
Mid ka mid ah cayaartoyda kooxda Juventus oo laga helay cudurka Coronavirus
Robin Van Persie-ga Cusub Ee Haatan Man United oo Luke Shaw Magacaabay
Xiddiga Jorginho Oo Ka Hadlay Wararka La Xiriirinaya kooxda Juventus
Xaaladda Guud Arsenal Ee Xili Ciyaareedka Dambe Oo La Saadaaliyey-Xiddigaha Joogaya,…
Kooxda PSG ayaa qorshanaysa in ay Real Madrid kula tartanto saxiixa xiddiga da’yarka…
Liiska xiddigaha ay Barcelona doonayso in ay ku darto…
Shaxaha Xiddigihii Abid Ugu Fiicnaa Qaaradaha Yurub Iyo…
FIFA ayaa baaraysa Hishiiskii uu ugu soo biirey Bruno…